Maxkamada Ciidamada oo Xukuno adag ku riday labo nin oo Al-shababnimo lagu eedeyey | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxkamada Ciidamada oo Xukuno adag ku riday labo nin oo Al-shababnimo lagu...
Maxkamada Ciidamada oo Xukuno adag ku riday labo nin oo Al-shababnimo lagu eedeyey
Maxkamadda darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun xabsi daa’in ah ku riday labo nin oo midkood maqane yahay oo Maxkamada ku heshay in Al Shabaab katirsan yihiin .
Mustaf Maxamed Xuseen oo ciidamada amaanka gacanta kusoo dhigeen ayaa lagu eedeeyay in gawaarida ku dhagin jiray qaraxyada , halka Maxamed Axmed Muumin oo maqane ah lagu eedeeyay in uu gacan ka geesan jiray qaraxyada gaadiidka lagu xiro
Maxkamada ciidamada Qalabka sida ayaa sheegtay in ninka maqanaha ah ee lagu magacaabo Maxamed Axmed uu ahaa ninka haga qaraxyada gaadiidka lagu soo xiro sidoo kale lacag ku bixin jiray.
Mustafa Maxamed ayaa horey usoo dhameestay xabsi shan sano ah oo horey ugu riday maxkamada ciidamada kadib markii lagu helay in uu Al Shabaab katirsanaa, ninkan ayaana la sheegay in dib ugu laabtay Al Shabaab markii xabsiga laga sii daayay.
Xeer ilaalinta Maxakamadda Ciidamada oo soo Eedeysay Mustaf Maxamed Xuseen ayaa loo heystaa in ilaa 8 Gaari uu miino ku xiray kuna qarxeen Magaalada Muqdisho, balse aysan geysan khasaaro nafeed.
Guddoomiyaha Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur ayaa sheegay in labada Nin lagu helay Eedeynta loo soo jeediyay,sidaas daraadeedna lagu xukumay Mustaf Maxamed Xuseen iyo Maxamed Axmed Muumin Xabsi daa’in.
Maqaal horeQarax ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo Faahfaahin dheeraad ah
Maqaal XigaMaxkamadeynta Wariye Gurbiya oo Maanta la soo geba-gabeeyay